မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ရာ စတူဒီယိုများ – စတူဒီယိုကောင်းတစ်ခုကို ဘယ်လိုရှာမလဲ – Shwehealth.com
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ရာ စတူဒီယိုများ – စတူဒီယိုကောင်းတစ်ခုကို ဘယ်လိုရှာမလဲ
3. မတျ 2016 14. ဧပွီ 2016
လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ခြင်းသည် ကျန်းမာသောဘ၀အတွက် အလွန်အရေးကြီးသည်။ ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းသည်။ ထို့အတူ အကြံပေးသို့မဟုတ် လေ့ ကျင့်ပေးသူတစ်ယောက်နှင်အတူ လေ့ကျင့်ခြင်းက ပို၍ကောင်းသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းနိုင်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံထိန်းထားနိုင်ခြင်း၊ နှလုံးသွေးကြောနှင့် အသက်ရှူလမ်း ကြောင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်းနှင့် အရွယ်လွန်အိုမင်းကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်း စသော အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိနိုင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန် ကလပ်များနှင့် စတူဒီယိုကောင်း များစွာရှိ သည်။ ယခုဆောင်းပါးအတွင်း၌ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ထိပ်တန်းစတူဒီယိုအချို့နှင့် မိတ်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်ပါ သည်။
ဈေးနှုန်းအားဖြင့် အနည်းငယ်မြင့်မားသော်လည်း Real Fitness သည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ထိပ်တန်း စတူဒီယိုများတွင် တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေဆဲဖြစ်သည်။ ယင်းသည် အမှတ် ၂၀၊ ပုလဲလမ်း၊ ရွှေ တောင်ကြားရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တွင် တည်ရှိသည်။ ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာ တနင်္လာနေ့မှ သော ကြာနေ့အထိ နံနက် ၆နာရီမှ ည ၁၀နာရီအထိဖြစ်ပြီး စနေ၊ တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များတွင် နံ နံက် ၇နာရီ ၃၀ မှ ည ၉ နာရီအထိဖြစ်သည်။
ယင်းနေရာတွင် Wi-Fi ရရှိခြင်း၊ လေအေးပေးစက်တပ်ဆင်ထားခြင်း၊ ဆေးလိပ်ကင်းစင်နေရာ များအပြင် ကားရပ်နားရန်နေရာလည်း ပါရှိသည်။ ယင်းစတူဒီယိုသည် နှစ်ထပ်အဆောက်အဦးတစ်ခု ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးပေါ် စက်ကိရိယာများနှင့် အသုံးအဆောင်များကို တပ်ဆင်ထားသည်။ အေရိုးဗစ် စတူဒီယိုများလည်း ပါရှိသည်။ ပထမထပ်သည် ကြံ့ခိုင်မှုလေ့ကျင့်ခြင်းများအတွက် အဓိကဖြစ်သည်။
ဒုတိယထပ်တွင်မူ အုပ်စုလိုက်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် အမြန်ပြေးခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်အထူးအစီအစဉ်များလည်း ရှိသေးသည်။
Real Fitness ၏ အခြား စတူဒီယိုခွဲတစ်ခုမှာ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင်တည်ရှိသည်။ အဆိုပါ နေရာတွင်လည်း ခေတ်မီပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် အသုံးအဆောင်များကို တပ်ဆင်ထားသည့်အပြင် ရေ နွေးချိုးခန်း၊ Wi-Fi ရရှိခြင်း၊ လေအေးပေးစက်တပ်ဆင်ထားခြင်းတို့အပြင် အာဟာရဓာတ်အခြေခံ အစားအစာများနှင့် ဖျော်ရည်များကို အထူးပြုလုပ်ပေးသော ကိုယ်ပိုင်ကဖီးတစ်ခုလည်း ရှိသေးသည်။ Real Fitness ၏ တကိုယ်ရေလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်သည်လည်း နာမည်ကျော်သည်။ လိပ်စာမှာ အမှတ် ၆၈၊ တော်ဝင်လမ်း၊ ၉မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်ဖြစ်သည်။ ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာ ရွှေတောင်ကြားစတူဒီယိုနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါစတူဒီယိုများအတွက် တစ်ရက်လေ့ကျင့်ခဈေးနှုန်းမှာ ၂၅ ဒေါ်လာခန့်ဖြစ်သည်။
Balance Fitness သည်လည်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ နာမည်ကျော် စတူဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်း သည် အမှတ် ၆၄ (ဆ)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တွင်တည်ရှိသည်။ အခြား စတူဒီယိုခွဲတစ်ခုမှာ အမှတ် ၁၀၃၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနှင့် သံလွင်လမ်းထောင့်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန် ကုန်တွင် တည်ရှိသည်။ ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာ နေ့စဉ် နံနက် ၆ နာရီမှ ည ၁၀နာရီအထိဖြစ်သည်။
အဆိုပါစတူဒီယိုတွင်လည်း သင့်အနေဖြင့် နောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အသုံးအဆောင် များနှင့် ခေတ်မီ အပြင်အဆင်တို့ကို ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့လိုက်လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ အေရိုးဗစ်စ တူဒီယိုများ၊ ဂျက်ကူဇီရေချိုးကန်၊ ရေနွေးချိုးကန်၊ ရေနွေးငွေ့ခန်း၊ အစားအသောက်ဘား၊ အကြော လျှော့ဇုန်၊ သီးသန့်စတူဒီယိုများ၊ တကိုယ်ရေ လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များနှင့် တကိုယ်ရေ အစား အသောက်အစီအစဉ်များကိုပါ ခံစားခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့အပြင် အခန်းတွင်း ကျောက်တုံး တက်ခြင်း၊ အလေးမခြင်းနှင့် အခြားအစီအစဉ်များလည်း ရှိသေးသည်။
မန်ဘာဝင်ရန်အတွက်ဆိုလျှင် ငွေ၊ ရွှေနှင့် ပလက်တီနမ်ဟူ၍ အဆင့်သုံးဆင့်ရှိသည်။ တစ်နေ့ တာ ၀င်ရောက်လေ့ကျင့်ခွင့်အတွက် ဒေါ်လာ ၂၀ ခန့်ကျသင့်မည် ဖြစ်သည်။
Active Gym မှာ အထက်ပါ စတူဒီယိုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် အနည်းငယ်သေးငယ်သော်လည်း စမတ်ဖုန်းဖြင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သော စက်ပစ္စည်းများ၊ နှလုံးလေ့ကျင့်ခန်းနှင့် ယောဂစတူဒီယိုစသည်ဖြင့် စုံလင်စွာ ထားရှိပေးထားသည်။ ယင်းသည် ၁၀လမ်းနှင့် ကုန်သည်လမ်းထောင့်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တွင် တည်ရှိသည်။ တစ်နေ့တာ ၀င်ရောက်ခွင့်မှာ (လက်ရှိအချိန်တွင် ၅၀%လျှော့ဈေးဖြင့်) ၁၀ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။
Body-Mind-Strength Fitness Centre (BMS)
BMS Fitness Centre သည်လည်း နှလုံးလေ့ကျင့်ခန်း၊ ယောဂစတူဒီယိုများ၊ အေရိုးဗစ်စတူဒီ ယိုများ၊ အကနှင့် အမြန်ပြေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် ဖျော်ရည်ဘားတစ်ခုအပါအ၀င် ပစ္စည်းအစုံအလင် တပ်ဆင်ထားသော စတူဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေနွေးချိုးခန်း၊ ရေနွေးငွေ့ခန်း၊ ဂျက်ကူဇီ ရေချိုးကန် များပါရှိသော ပစ္စည်းသိမ်းခန်းတစ်ခုလည်း ရှိသည်။ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့အထိ နံနက် ၉ နာရီ မှ ညနေ ၃ နာရီအချိန်မှာ happy hours အချိန်ဖြစ်သည်။ တစ်ရက်တာ အသုံးပြုခွင့်မှာ happy hours အတွင်း၌ ၇ ဒေါ်လာဖြစ်ပြီး happy hours ပြင်ပတွင် ၁၀ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ တည်နေရာမှာ အမှတ် ၁၃၁၊ ဂ-၀၀၁၊ ရွှေပြည်အေးကွန်ဒို၊ ဗားကရာလမ်းနှင့် ရွှေပြည်အေးလမ်းထောင့်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တွင် ဖြစ်သည်။ ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာ နံနက် ၆နာရီ ၃၀မှ ည ၉နာရီအထိဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်ရှိအခြားနာမည်ကျော်ကြားသော အားကစားခန်းမများမှာ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်၊ ကုန်သည် ကြီးများဟိုတယ်၊ ဆူးလေရှန်ဂရီလာဟိုတယ် အစရှိသော ဟိုတယ်ကြီးများမှ အားကစားခန်းမများနှင့် International Health & Beauty Centre (IHBC) တို့ဖြစ်ကြသည်။